Umzimba Iphesenti fat wokubala ikuvumela ukubala nemingcele zakho ezahlukene zomzimba, ezifana isisindo sakho ekahle, ibe namafutha omzimba nomzimba iphesenti fat, isisindo ngaphandle fat, umzimba shape uhlobo, umzimba basal, kwesisindo umzimba kanye nezinye. It sinquma okusekelwe yakho sex, age, isisindo, umzimba osayizi kanye ezingeni umsebenzi.
Sex: Female Wesilisa
cm izinyawo / amayintshi
Ukuphumula sokushaya kwenhliziyo:
Kubalwa njengoba isilinganiso 3-5 yizilinganiso isibalo beats inhliziyo ngomzuzu in the morning after embhedeni.
Waist (e iphuzu thinnest):
Ngokuvamile, lena indawo ngaphezu inkaba.
Hips (ingxenye yasakazwa):
Yelula isandla sakho parallel emhlabathini. Gobisa fore yakho yingalo 90 degree ukuze ibhodi lemisindo yakho kuyinto perpendicular emhlabathini. Sebenzisa umunwe isithupha kanye forefinger of Ngakolunye uhlangothi, balinganise amabanga phakathi amathambo. Kala ibanga isandla (phakathi isithupha sakho finger ne forefinger) nge ngezinga okuyinto ingcoza nobubanzi.
Cacisa yakho ezingeni yokuphila umsebenzi.
umsebenzi sedentary umsebenzi ukukhanya umsebenzi isilinganiso umsebenzi omuhle umsebenzi esiphezulu
Cacisa injongo imisebenzi yezemidlalo.
uthole isesimweni esihle umzimba Kwesisindo ube namandla athe xaxa umzimba wezemidlalo ezemidlalo impikiswano
Online ikhalori counter
Zingaki kilojoule wena emsini (bangakunaki kilojoule) ngesikhathi egijima, ehamba, ebhukuda, njalo njalo.
Ideal isisindo wokubala
Bala isisindo ekahle umzimba kwabesifazane kanye namadoda e ukwencika ubudala bakho, ukuphakama kanye nohlobo umzimba.
Ibala lesikhumba wokubala
Bala umzimba wakho ukuma uhlobo umzimba, isisindo sakho ekahle, ibe namafutha omzimba kanye umzimba iphesenti fat, umzimba wakho level kanye nezinye.